“Humusha Zonke Posts” inkinobho esuswa izilungiselelo Transposh panel in WordPress 3.3!
Lutho neze, iya okukhethwa screen phezulu ekhasini futhi uqiniseke izinsika ezimbili akhethwe.
Okufushane New unezela esinye value meta ukuba ngamunye amakhasi elihunyushwe. Lokho kugcina izinjini kusukela hhayi indexing kuwo (Angazi kungani).
Sicela abheke ngaphakathi kuwo.
Siyaxolisa, ukuthi kungenzeka kungabi isizathu. Kodwa ngenxa ezinye izizathu, Amakhasi elihunyushwe kungukuthi ukubanjwa ngokobungako 🙁
Ngokwazi ngiyazi amakhasi elihunyushwe ukubanjwa enezikhombo. Transposh indawo wewebhusayithi amathuluzi ukhombisa izinga ~ 98% of the amakhasi kokuba enezikhombo, futhi lokhu kuvumelana ukuzithoba a xml Ibalazwe ohlanganisa zonke izilimi. Ungase ngcono amathuba okuba amakhasi lihunyushwe ngokusebenzisa amafulegi iwijethi, noma kokuthumela Ibalazwe lesifanele, Google ungasebenzisa tag rel wanezela amakhasi, kodwa lokhu akuyona into eqinisekile.
Ngathola okuqukethwe kuphela english e sitemap.xml (XML-Sitemap Gen 3.2.6) . Indlela ukuhlanganisa okuqukethwe ngolimi eziningi ukuthi “ukuhumusha sonke” e sitemap.xml?
Siyabonga plugin yakho engcono 😀
Sicela ulandele imiyalelo FAQ for ngokuchibiyela XML-Sitemap
Thanks for the update. Kanjani ngishintshe okwehliswayo amafulege? Akukona in FAQ yakho. Yikuphi php Ngizihlela?
Awudingi the FAQ, ngokujwayelekile wena nje kufanele ukhethe efanele widget ukubukeka ekubukekeni / amawijethi menu.
Kodwa yami is inbedded e unhlokweni yami angazi ukusebenzisa ngokusebenzisa amawijethi nje lapho kumbangela izinkinga ngaphambi. Kanjani ngishintshe amafulege kuleli cala? Thanks
Empeleni lokhu akusho avele FAQ, shintsha unhlokweni yakho ngendlela efanele
Mayelana amafulegi widget, oyaziyo it ihlatshwe umkhosi njengoba zokunciphisa speed page ( google seo )
is ubani wayegila ukuvuselela le ngxenye ikhodi ?
bheka skrini kusuka google umbiko ( Siyaxolisa url ezimbi ngifuna 🙂 ) :
Kukhona amawijethi ezimbili, futhi ngaphandle css sprites, uma ufuna umuntu ngokushesha, sebenzisa version CSS
Hewu, I m an idiot, Bengingazi ukuthi yiziphi 2 amawijethi, Manje yami google page isivinini http://www.obviousidea.com amvusa 86/100 ukuze 92/100 kuphela lolu shintsho !!! engakholeki !
Konje, thina olusha namuhla Transposh futhi wordpress 3.3 futhi ubone ukuthi isebenza 🙂
I abe umbhangqwana imibuzo. Okokuqala, Kungenzeka umuntu ukuhumusha amakhasi yami ngokusebenzisa Transposh. I mean for umngane ukuhumusha ngokunembile / kuyawushintsha kubo kodwa namanje usebenzisa iwijethi Transposh?
Okwesibili, I am kokuba udaba FB wami like plugin kubonakala ukwamukela ifulege isiPutukezi Transposh njengoba thumbnail yami phezu facebook abantu wall. Uyazi lutho ngalokhu noma uma kukhona indlela ukuyeka it enzeka?
Siyabonga isikhathi sakho, ukuthi njalo baziswa kakhulu.
Ngokuba kumagazini wokuqala, njalo ungasinikeza umngane wakho i-akhawunti kusayithi lakho kanye umhumushi izimvume, Ngikholelwa ukuthi le uyokwenza lokho ofisa.
Ngokuphathelene entweni yesibili, Angazi ukuthi plugin, inkambo engcono yokwenza izinto wukuthi wena udale ithikithi kithi ekutfutfukiseni server yethu, futhi sizobe ukuya kuso ngesikhathi.
Hi, I unemiphumela 404 Not Found futhi ifomu engafinyeleleki Amathuluzi Master Web Google, Not wathola(24,206)‎, Ingatholakali(21,368)‎ . It ukukhombisa nsuku zonke. Manje visittor yami futhi simo Google uphonsa kakhulu.
Sicela asikisela me hot ukuxazulula le nkinga. Futhi ngiyabonga kakhulu usizo lwakho.
Sebenzisa ifomu contact bese usithumela ezinye idatha isampula futhi sizobe sibone ukuthi singenza.
Kungakhathaliseki ukuthi uhlela ukuzivumelanisa Transposh for phpbb3 engine?
Yebo, sihlelwe, bafuna ukusiza?
Yebo, Ngingathanda ukusiza, kodwa abazi ukuthi. Angisona uMklami php.
Lena ezinhle ukulungiswa ngonyaka 😉 ufunde ezinye izinhlelo php ngenkathi usebenza kulo msebenzi. Ngiyokujabulela ukuboleka kuwe isandla lapha nalaphaya.
Hi, Ngifuna ukuba ubuyekeze inkinga yami futhi fixed.
1. I esetshenziswa Google (XML) Namamephu Generator 4.0b8 Beta, It ziyanda page index kakhulu.
2. Ngashintsha W3 Total Yehhovisi ukuba Yemibhalo Yehhovisi Quick, ukuthi ukusebenzisa for 3 Ngonyaka. Isilondolozi Quick kangcono kunokuba W3TC ethemini ijubane futhi ukuhumusha ngokushesha (kuka W3TC). Qinisekisa by Amathuluzi Webmaster Google – Khasa izibalo ukuthi lapho i ukusebenzisa W3TC, Isikhathi esichithwa ukulanda nokwanda page ukuze 2000ms kusuka <200ms, manje ukunciphisa lapho i kwi Yemibhalo Yehhovisi Quick. Kimina lokhu plugin ofanelekile Transposh.
3. 404 akutholakalanga kusadingeka inkinga. I uzoqapha 3-4 izinsuku uma akusenzi, i ngeke akucele aphinde.
Yossawat, Ungazi ukuthumela isixhumanisi indawo web noma page, Ngithanda ukuhlola, Ngangivame isilondolozi inani w3 futhi Transposh ngokwami, curious ukubona lokho kungaba inkinga yakho.
Ngiyabonga kakhulu Fabrice Meuwissen, Manje i kwafakwa W3TC by Yemibhalo Yehhovisi Quick.
enza Quick isilondolozi isibambo futhi CDN like Amazon S3 & ifu front ?
U-opharetha wakho translation kuyaxaka ngokuphelele. Mhlawumbe kungcono engenangqondo nakakhulu izinguqulo esiNgisini Swedish, njengoba yonke Swede ubani nesithakazelo “elihunyushwe” Amasayithi bazakwazi English a lot ngaphezu kwakho “service” wazi Swedish. The abafundi niyohleka noma ukuhwaqabala, into kuphela bangeke ukwenze ukuqonda.
I ngempela Angiqiniseki ukuthi kungani mina evunyiwe ukuphawula, kwakungeyona emihle kakhulu noma ulwazi. Yini Engingakusho ukuthi cishe ngempela lesifanele, translation okuzenzakalelayo enza umkhiqizo imiphumela azilungile futhi ngezinye izikhathi ngisho ihlaya, Nokho lokhu kungani Transposh ukhona, ukuze ungasebenzisa isixhumanisi encane edit translation ngezansi widget empeleni ulilungise bese wenze kube ngcono, it beats isiqiniseko nokugcina amakhophi amabili okuqukethwe efanayo futhi kungcono kunokuba translation okuzenzakalelayo.
Kodwa ngempela, ungenawo ukuyisebenzisa…
Sawubona, kuqala konke Ngiyakuthanda plugin yakho!
Okwesibili, Ngidinga usizo oluncane uma kungenzeka. Indawo My zihlanganisa izilimi ezahlukene kanye iphutha kolimi lami liyisiphuzo english. Uma I Ukushintshela kolunye ulimi ezahlukene kunalokho english plugin njalo ukuhumusha konke. Inkinga wukuthi ngingathanda plugin ukuhumusha ngisho ulimi olumisiwe (English) isethwe, ngoba sami Buddy press umsebenzi akuwona wonke ezikuwo kukhona ulimi olufanayo. Konke muhle usebenza ngazo zonke izilimi kodwa ezenzakalelayo. Ngithemba bucace, uma kungenjalo ungabheka esizeni yami faceboooh.com.
Ngiphinde babe nenkinga efanayo ziye zabika (futhi sixoxisane imeyili kanye Ofer) ekuqaleni kanye.
Mhlawumbe lokhu okulandelayo kuzokusiza Ofer? Ngisanda efakwe WP-FB-AutoConnect, futhi kungakhathaliseki engakwenzayo, Ngaqhubeka ukuthola lewebhu eyayithi, “Sicela musa ukufinyelela leli script ngqo.” Through kakhulu izinwele-edonsa, Ngathola ukuthi plugin empeleni abazange ungena kimi ukuba indawo yami nge-akhawunti yami FB; Nokho, I akazalwanga kabusha isiqophi imidlalo indawo yami. Umthuthukisi wangiqinisekisa ukuthi kufanele asebenze.
Ngakho, I ivaliwe yonke plugin futhi waqala isebenze ngayinye ngayinye. Lowo kuphela ukuthi akazange avumele WP-FB-AutoConnect ukuphetha kahle kwaba Transposh. I wasidlulisela lokhu FB plugin umthuthukisi owathi lokhu akuyona okokuqala ukuthi lokhu okuye bambikela Transposh.
Angikhulumi engqongqoza Transposh. Ngicabanga ukuthi i-plugin awesome. Ngiyakuthanda, Engikudingayo ngempela, bafuna ngempela ukusebenza ngenxa Buddypress yami indawo. Sethemba, lokhu bit zolwazi kuzosiza.
Hi Quint, Siyabonga ukuphawula kwakho. Kwadingeka ncamashi inkinga aba nayo WP-FB auto ukuxhuma futhi emva ezibika umqambi I ekugcineni Ngagcina Zishiya WP-FB futhi esikhundleni salo Social-Connect. I ngempela ungathanda ukugcina Transposh ngiyamthanda ngalo futhi ngiyethemba ukuthi kukhona lapha angasinika usizo oluncane.
Ayelindele Ngokugcwele ukuthi uzoba ungitshele ukuthi lokhu kuyinkinga ngaphandle Transposh, kodwa ubungeke yini okungenani sicela abe look at lokhu line yethu log Iphutha? Sithola enye yalezi ngomzuzwana.
[09-Feb-2012 14:39:05] PHP Isexwayiso: Ukuzama ukwabela impahla non-into /home/apexwpa2/public_html/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/core/parser.php on line 656
Angazi ukuthi kungani kwenzeka, ukubheja umhlabeleli ukuba umane ukucindezela iphutha usebenzisa php sika @ umyalelo
I kusulwe a lot of izihloko ezivela blog yami.
Ngangicabanga ukuthi ubukhulu amatafula kanye Translation translationlog sancipha, kodwa akusikho.
Ngicabanga ukuthi kukhona izinguqulo kwesokunxele in the database engenamsebenzi.
Kukhona indlela ukuqeda labo futhi kuncishiswe database?
P. S.: lokhu plugin mkhulu!
Nakuba angikholwa ukuthi ubukhulu database okubalulekile kakhulu ezindaweni zanamuhla ibamba, kungase ngempela kube ukuhlakanipha ukwenza ezinye cleanups isimo sakho, ekhasini setting, I asikisela ususe zonke izinguqulo auto omdala kunawe 14 izinsuku, ningakhathazeki kakhulu uma ulahlekelwe noma iyiphi translation auto kokuba sisetshenziswe njengeHholo labo kumele kabusha empeleni.
Umngani wami ukuhlela translation njengoba engaziwa. Yena hhayi ungene phakathi dashboard yami. Okuhunyushiwe akhona uma Ngithathe ungenile kodwa ngokushesha nje lapho ungena ephuma ungekho. Ingabe ikhona setting noma ibhokisi ukuhlola lapho kumele uzamukele noma ukubenza bukhoma? Ngangineminyaka bacabanga ubani hlela bese ushicilele izinguqulo? Noma yimuphi iseluleko yayiyobizwa kakhulu ukuba njalo.
Ungase ube plugin ukulondoloza isikhashana okungasekelwe Ukuqabuleka, lokhu ukubheja wami omkhulu lapha
Ngiyabonga ofer! Sine W3TC, uma ikhona nezindaba ukuthi kubangela kanye Transposh, Ngicela ungazise.
Ngiye ukhubaze TP_ENABLE_CACHE in constants.php (zashintsha yamanga.) isilondolozi kusulwe (wp super isilondolozi) kodwa namanje inkinga uhlala. Okufanele I wengeze transposh.js ukuba wasenqaba ejenti yomsebenzisi?
Nginezinkinga ezimbili. Okokuqala, I ubhalisele Bing Humusha API at Windows Azure iMakethe bese elingisa ukhiye akhawunti singene MSN API insimu key in the izilungiselelo Transposh. I bakholwa lokhu kwakuyokwenza kube nokwenzeka ukuba usebenzise inguqulo ekhululekile wanikela of 2 izinhlamvu million. Nokho, lutho Ufika elihunyushwe. Uma I chofoza “Humusha All Manje” inkinobho it nje izikhathi out emva kwemizamo emihlanu.
Okwesibili, window Ugaxekile lapho mina ngesandla hlela izinguqulo babonakala low z-index value. Amamenyu nemifanekiso avele phezu kwalo, okwenza kube nzima ukusebenzisa. The indaba ephathwayo I am besebenzisa kuyinto “Twenty Eleven 1.3”, okuyinto akufanele kube ukuthi exotic, ucabangela ukuthi lakhiwa iqembu WordPress.
Cishe ngeke babekopisha ukhiye API for Bing kahle, futhi uthola i AppID invalid, empeleni – Ezimweni eziningi akudingekile ukuba ukuyisebenzisa ngaso sonke, ungakwazi nje ushiye isikhala field.
Malungana z-index, Ngicabanga uqinisile, futhi lokhu kuzolungiswa ezinguqulweni Ukuza
Ngingena ukhiye API ngoba Ngangicabanga ukuthi edingekayo. I banenkinga efanayo uma ngisusa ukhiye, nge “Translation akuphelele” futhi sokuvala emva imizamo emihlanu, kokubili Google and Bing. Ngazama ufaka, nokususa zonke izinguqulo othomathikhi, futhi ngokuchofoza amaphutha fix by inkinobho odlule izinguqulo. Still akukho go. Bengilokhu egijima Transposh okwesikhathi eside.
Siyabonga zokuthola z-index in the version elilandelayo!
Google ukuhumusha ayisebenzi kusayithi lakho ngoba awunaso zinyakaze ukwesekwa umtapo on server yakho, MSN empeleni enza umsebenzi, futhi ngibona bug encane edalulwa ukukhethwa injini okuzenzakalelayo, une izindlela ezimbili ukulungisa le manje – eyodwa – ukufaka zinyakaze, futhi amabili, khetha bing njengedifolthi isiphequluli sakho ekhasini lakho izilungiselelo.
Sicela ungigcina posted on isebenza kanjani
Ngibonga kakhulu! A simple 'efaneleka-uthole ufake PHP5-zinyakaze’ benza iqhinga 🙂
Ngibekile le nguqulo yakamuva Transposh on website yami (www.duttotech.com) kodwa izilimi elihunyushwe English and Italian kungukuthi enezikhombo in google…
Nginaziphi ukushintsha abanye setting ukuze lokho?
Ephreli 29, 2012 at 12:22 at the
Njengami, ngezinye izikhathi Google ithatha isikhathi, Angazi bheka amakhasi English site lakho kokuba ngokobungako manje…